लोकतन्त्र, सुखी जनता र समृद्ध लमजुङको कथा - Darpan News
लोकतन्त्र, सुखी जनता र समृद्ध लमजुङको कथा
२०७७, ११ श्रावण आईतवार १५:१७
बोलाँैं के बोलाँैं आफ्नै चाहना जोडिएकोछ , लेखौंँ के लेखौंँ कथाको पात्रता पनि आफ्नै जीवनीसँग जोडिएको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रवादी नेताहरुकै अकर्मण्यताले गर्दा त्यसले आफूलाई संस्थागत बनाउनै पाएन, जब संस्थागत बन्यो दुई वर्ष पनि टिकेन ।
राजनीतिक दलहरुकै आपसी छिनाझम्टीले प्रजातन्त्र गयो । दोष राजा महेन्द्रलाई दिएर नेताहरुले आफूले गरेका अराजक गतिविधि, गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारहरुलाई ढाकछोप गरे । २०१७ मा पञ्चायत आयो राजाको गैरजिम्मेवारी र पञ्चहरुको निरंकुश व्यबहारले पञ्चायत पनि गयो । त्यसको दोष पञ्चहरुले राजालाई दिए र उनीहरुका गुण्डागर्दीको ढाकछोप गरे । २०४७ सालमा पनि फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । जनतालाई पञ्चायतसँग लडाएर राजनीतिक दलहरुले प्रजातन्त्रको अमृत पान गरे । जनतालाई बेवास्ता गर्न थाले, जनता फोहोरी, अनपढ, मूर्ख, बुद्धि नभएका स्वाँठ कहलिए र नेता सर्वज्ञाता बने, चप्पल फेरेर जुत्ता लगाए, कार्यकर्ताले दिएका जडौरी कपडा फेरेर मयलपोस, वा सुटबुट लगाए, सरकारमा पुगे, ठेकेदार चिने, बिचौलिया चिने, उनीहरुसँग मिलेर करोडौंँ रुपैयाँंको कारोवार गर्न थाले । घडेरी जोडे, गाडी जोडे, छोराछोरी विदेश पठाए, जनताका छोराछोरीलाई न पढ्नसक्ने न रोजगारी दिने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारे र अरबको खाडीमा लगेर बेच्ने नीति अबलम्बन गरे । देशमा रोजगारी र उत्पादनको लागि कुनै नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएन । एउटा पनि योजना बन्न सकेन ।
२०४७ पछिको सबैभन्दा ठूलो देश विकासको योजना खाडीमा नेपाली युवा युवती बेच्ने काम नै बन्यो । अरु योजना रातो किताबका पाना भर्ने विषय मात्र बने । विकासका अनेकौंँ गगनचुम्बी गफ हाँके, सांसदहरुसँग जिल्लामा के के गर्ने भनेर सोधे आआफ्ना गाउँंतिर के के गर्नुथियो त्यही कामको लिस्ट बनाएर पेश गरे, तिनै मागिएका कामलाई योजना भनेर रातो किताब छापेर पठाए । बस् देश विकासको योजनाको ठेली जिल्ला जिल्लामा पठाए । सांसदको तलब भत्ता पचाए, मन्त्रीको तलब भत्ता र कमिशन पचाए, पैसा जम्मा गर्दा गर्दा ठाउँ नपाएर विदेशी बंैंकमा पनि पठाए, विदेशमा लगेर पेटा«ेलपम्प चलाए रष्टुरेण्ट चलाए, जनतालाई कानुन लगाए, बोल्न नसक्ने बनाए, निजामति र प्रहरीलाई पार्टीका विभाग बनाए । कांग्रेस सरकारमा गए कांग्रेस पाटीका विभाग, कम्युनिष्ट सरकारमा गए कम्युनिष्ट पार्टीका विभाग, बस् नेता, निजामती कर्मचारी र प्रहरीको कार्यगत एकतामा सरकारहरु चले युवा युवतीजति बेचिए, वृद्धवृद्धा सन्तान भएर पनि सन्तानविहीन भए, कोही सडकमा पुगे, सडकबाट समातेर सुरक्षित आश्रममा लगेर पालन तालन गर्छु सरकार हामीलाई आश्रम बनाउने ठाउँं देऊ भन्दा लोकतान्त्रिक सरकार सडक मानवको संरक्षण गर्छु भन्नेलाई पनि लाखाँैं राजश्व तिर भन्छ ।
सरकारलाई राजश्व तिर्ने कि सडक मानवको व्यबस्थापन गर्ने ? हाइ हाइ, यो देशको कथा धेरै बदलिएछ, राणाहरुको जमानाका कुरा सुन्दा डराउने नेपाली हामी, पञ्चायतको कथाले पनि विक्षिप्त बनाउने हाम्रो ह्ृदय आज कता कता त्योभन्दा पनि निष्ठुर, जनतालाई पिना निचोर्दा झै निचोर्ने राजनीतिक व्यवहार व्यहोर्न पर्दा आफैँप्रति धिक्कार लाग्छ । जनताले कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई ठूलो भरोसा र विश्वासका साथ भोट दिएर विजयी बनाएर सांसद बनाए, मेयर बनाए अध्यक्ष बनाए त्यसको बदलामा अपमान, बेवास्ता, जनतालाइ सेवा सुविधा दिन्छु भन्दै राजश्व, कर, फाइन, हप्की, गाली, थर्काहट, घुस, कमिशन लुट दिएको देख्दा के सोचियो के ल्याइयो, भोलि के गर्ने भन्ने कुराले फेरि एकपटक घोत्लिएर बिचार गर्न जनतालाई वाध्य बनाएको हो कि ? असल शासनको आशा थियो, तर यौटा सानो काम गर्न एक दिन होइन दुई दिन होइन दशाँैं दिनमा पनि सम्भव भएन । हिजो पञ्चायतको समयमा जुन काम केही घण्टामा हुन्थ्यो, आज त्यही काम गर्न पूरै एक दिनले नपुग्नेरहेछ । एउटा जग्गा पासको काम एक दिन होइन, दुई दिन लाग्ने रहेछ । त्यति मात्र होइन उद्योग धन्दा, रोजगारी केही नभएको देशमा जग्गा जमिन धितो रोखेर वा छेउलोप्रो बेचेर कतिपय समस्या समाधान गर्ने चलन भएको देशमा जग्गा चलाउनै नपाइने । चलोस् वा नचलोस् बाटो भएपछि त्यहांको सिफाारिस दस्तुर नै हजारौंँ रुपैयाँ, त्यसको मालपोत राजश्व नै रोपनीकै लाखौंँ रुपैयाँ, किनेर वा बेचेर लाभसाभ केही छैन लाखाँैं रुपैयाँ लाभ कर, एक रोपनी जमिन बेचेर समस्या टारौंँ भन्ने जनतालाई करैकरको चेपमा पारेर निचोर्नसम्म निचोरी रहेको, त्यस्तो नियम बनाउने जनप्रतिनिधि र निजामति क्षेत्रले अव्यावहारिक रुपमा जनतालाई दिएको सास्ती हेरेर बस्ने, धैर्य गर्ने कति ? जनताका समस्या हेरेर अट्टहास गरेर बस्ने जनप्रतिनिधिहरु समाजवादका पहरेदार ! अचम्म छ यो देश ! अझ मेरो लमजुङ्ग ! स्वर्गसँग दांजिने मेरो देश मेरो लमजुङ अहिले नरक बनेछ । जताततै जनतालाई दारा धसेर लुछ्ने स्थानीय संरचना बनेछ । म नेकपाको सदस्य, यहाँ शक्तिशाली जिल्ला कमिटी छ कहिल्यै बैठकमा छलफल गर्ने राम्रो एजेण्डा पाउँदैन । जनप्रतिनिधिको जिल्ला कमिटी आफ्नै एजेण्डा राख्न मिल्दैन । जनप्रतिनीधिलाई निर्देशन कसले दिने ? त्यसको जिम्मा सायद आफैंँले लिनु पर्छ । हरे राम ! कस्तो फसाद ? अब रामनाम जप्नु नै द्वन्द्वात्मक भौतिवादको अभिष्ट । माक्र्सवादी द्वन्द्ववादको कुरा कसैले बैठकमा वा बाहिर पनि नउठाइदिए ! कम्युनिष्ट पार्टीका बैठक कति शान्तिपूर्ण हंँदाहुन् ? जनप्रतिनिधि र पार्टी संगठनबीचको अहिलेको रामनामी द्वन्द्ववाद सधैँ यस्तै रहिदिए ! कति आनन्द ।
मेरो जिल्लामा अहिले भाइ छुट्टिने चलन हराएछ । अंशवण्डा गर्ने सम्पत्तिको मूल्यभन्दा बढी अंशवण्डा गर्दाको राजश्व बढी । जग्गा बेचेर गर्जो टार्ने चलन पनि हराएछ किनभने जग्गा बेच्दा आउने मूल्यभन्दा वडाले गर्ने सिफारिस दस्तुर बढी । जग्गा बैंकमा राखेर गर्जो टार्न पनि छोडेछन् जनताले किनभने बंैंकबाट लिने ऋणभन्दा सिफारिस र बैंकको सेवा चार्ज नै बढी । त्यसैले अहिले कतै पनि आर्थिक कारोवारमा दौडन नपर्ने भएछ, जनतामा हिँड्नै नपर्ने शुख त आएछ तर समृद्धि त अब माथितिर उकालो लागेपछि पक्कापक्की नै होला ! समृद्धिका आधार सिफारिस दस्तुर, कर, राजश्व नै हुन् भन्ने प्रष्ट सिद्धान्त बनेछ ।
बेसीशहरको म बासिन्दा यसको विकाससँग मेरो शुख समृद्धि आधारित छ । शहरको विकास, विस्तार, वैज्ञानिक योजनावद्ध शहर, उद्योगधन्दा, जैविक उत्पादन पद्धति, पर्यटकहरुको उल्लेख्य संख्या, जसले गर्दा देसैभरिका जनतालाई स्थायी बसोबासको लागि आकर्षण गर्ने सौन्दर्यता, जनता र जनप्रतिनिधि मिलेर विकासमा अग्रसर भएको सहकार्यको परिवेश, यो नगरको विकासका आधार होलान् । तर यी कुराहरु कति छन् कति छैनन् त्यसैलै यो पालिकाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । कोही आएर जमीन किन्नै नसक्ने बास बनाउनै नसक्ने अवस्था शहरी विकासको लागि अवरोध हो । शहरमा आउन चाहनेलाई अस्वाभाविक करको बारबन्देज लगाउने कामले भने शहरको भविष्य अन्धकार बन्न जानेछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताका समस्या र सल्लाहलाई सम्मान गर्नैपर्छ । उनीहरु जनताबाट टाढा हुनै सक्दैनन् । त्यसैले असल शासन, व्यापक जनसहभागिता, जनताको जीवनस्तर गरिबीको रेखामाथि, सबैका लागि घर र सबैलाई रोजगारी जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा सधँैं रहनै पर्छ ।
लमजुङको कर प्रणालीले यहाँका जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको पक्षमा होइन विपक्षमा उभिएको देखाउँछ । नेपालकै कतिपय पालिकाहरुमा जनतालाई करको अनावश्यक बोझ बोकाउनु हुन्न र शहरको विकास र विस्तारको बाटो बन्द गर्न हुन्न भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसाथ गरी करलाई सरलीकरण गरिएको छ । त्यो हो जनप्रतिनिधिको सक्षमता र जनपक्षीयताको परिचय । त्यस्ता पालिकामा जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामले पार्टी पनि स्थापित भैरहेकोछ । जनता पनि खुशी छन् । केन्द्रमा पार्टी जतिसुकै बिग्रे पनि स्थानीय रुपमा पार्टीलाई समेत स्थापित गर्ने काम त्यसबाट भैरहेको हुन्छ । तर धेरै पालिकाहरु पलिकामा डोजर आतंक मच्चाएर विकासको ढ्वाँग फुक्ने गर्छन् । अब डोजरमात्र चलाएर विकास हाइन विनासबाहेक केही हांसिल हुने देखिँंदैन ।
विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाएर गाउँका गाउँ सखाप पार्ने, सडकको आवश्यकता छ कि छैन तर जनप्रतिनिधिको चाहनाले मात्र डोजर लगाउनैपर्ने यतिवेलाको नेपालको अत्यन्त ठूलो समस्या बनेको छ । जनप्रतिनिधिले नै डोजर किनेर ठेक्का आफैंँ लिने पनि चलन विकास भएको छ यो त देश विनासको प्रत्यक्ष कारण हो । आखिर विनासले त जनतालाई सुख र समृद्धिको लक्षमा पु¥याउन नसक्ला । खुदी घनपोखरा क्षेत्रमा बिष्फोटका साथ सडक निर्माण गर्दा तीस घर पैरोले बगाएको, अन्यत्र देशैभरि खोला मिचिएर, भिरमा घर बनाउन दिएर, खोलाको बालुवा र ढुंगा जथाभावी झिक्दा खोलाले धार बदलेर घर, सम्पत्तिसँगै यति ठूलो मानवीय क्षति भैरहेको उदाहरण यतिबेला जताततै देख्न र सुन्न पाइएकै छ । यो कुराले जनप्रतिनिधिलाई केही अनुुभूति गराउनै पर्ने हो ।
अहिले निजामती क्षेत्र जनताको पक्षमाभन्दा नितान्त आफ्नो स्वार्थमा निर्लिप्त छ जसले गर्दा असल शासनको कुरा एकादेशको कथा बनिरहेको छ । जनता निजामती क्षेत्रसँग आफ््ना बारेमा केही पनि आशा गर्नै नसक्ने अबस्थामा छन् । उता जनप्रतिनिधिहरुले पनि जनताको कुरै नसुन्ने स्थिति बन्यो भने जनताले सुख समृद्धिको कुरा कथामा पढ्ने अवसरमात्र पाउनेछन् । आफ्नो पालिकामा भएका वा हुने सम्भाव्य खतराको बारेमा र पालिकाको विकासको बारेमा उठाइएका आवाज त सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुको शक्ति अझै बढाउने र उनीहरुलाई सहयोग गर्ने काम हो तर जनताका त्यस्ता आवाजलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसले अन्ततोगत्वाः पालिकाको वर्तमान र भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने काम मात्र गर्नेछ ।
अहिलेको बेसीशहरको जमिन लेनदेनलाई गगनचुम्बी कर र तिर्नै नसकिने दस्तुरले विकासमा ठूलो अबरोध पु¥याइरहेको छ । यो उच्च करप्रणाली रहेसम्म पालिकाको विकासले गति लिनै सक्दैन बरु अन्धकारको गर्तमा यो पालिकालाई पु¥याउने काम मात्र हुनेछ । यसको कारण जनताको आवाज, अनुरोध र रोदनलाई अनदेखा गर्नु हो । गगनचुम्बी करले संसारमा कुनै पनि देश वा शहरको विकास भएको छैन बरु करको दायरा फराकिलो पारी सबैलाई जनताको औसत हैसियतअनुसार कर लिनु पर्छ । जनतालाई यात रोजगारी दिई जीवन निर्वाहको वैकल्पिक आधार निर्माण गरिदिनु प¥यो या त जग्गा जमीनको प्रचलनलाई खुला गरिदिनु प¥यो । बरु देशभरि जग्गाको मूल्यलाई नियन्त्रण गरी सरकारी संयन्त्रमार्फत सरकारले तोकेको मूल्यमा मात्र लेनदेन गर्ने व्यबस्था मिलायो भने देशमा समृद्धि आउन धेरै समय लाग्ने छैन । जति जग्गाको मूल्य कम भयो त्यति नै जग्गा काम गर्नेको हातमा पुग्नेछ । देशैभरिको जग्गाको मूल्य अहिलेको भन्दा सयौंँ गुणा घटाउन आवश्यक छ । जग्गाको मूल्यमात्र वृद्धि गरेर देशको अर्थतन्त्रमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्दैन बरु त्यस्तो अनुत्पादक कार्यले देशलाई डुबाउँछ । देशभरि उपयुक्त मूल्यमा जग्गा किन्न वा बेच्न पाउने अवस्था बन्यो भने जनताले जग्गालाई सम्पत्तिको आधार होइन उत्पादनको आधार बनाउनेछन् । जग्गा किन्न र बेच्न सहज बनाइदिने हो भने शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि भई शहरीकरणले गति लिन सक्छ । त्यति मात्र हनै त्यहाँ एकीकृत वस्तीको विकास हुन्छ । स्मार्ट शहरको विकास पनि त्यहीँ हुन्छ । पालिकाले तुरुन्त उत्पादन र उद्योगहरुमा लगानी केन्द्रित गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छ र त्यसले शहरमा मानिसहरुको संख्या बढ्दै जान्छ । अहिल जसरीे जग्गा चलाउनै नसकिने स्थिति कायम राख्यौँ भने बेसीशहरको शहरीकरणको गति अबरुद्ध हुनुको विकल्प छैन । यसले बेसीशहरको भविष्यलाई नै अन्धकार बनाउने छ । मस्र्यांङ्दीलाई पालिका विकासको आधार बनाउने सोच अहिले नै गरिएन भने बेसीशहरको भविष्य बन्दैन । यसतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ र शहरवासी जनताको आबाजलाई सुन्नै पर्छ ।
बेसीशहरको भविष्य बनाउने नै हो भने तत्काल अहिलेको करको दरमा आधा कटौती गरिहाल्नु पर्छ र शहरको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाइहाल्नु पर्छ । एकीकृत वस्ती र स्मार्ट शहरको विकासको लागि ठोस योजनाको साथ अगाडि बढाइहाल्न पर्छ । केन्द्रले लिएको स्मार्ट शहरको परियोजना त लामो समयसम्म निर्माणको नाममा खाने ठाउँ बनाइएको मात्र हो । एकीकृत वस्ती र स्मार्ट शहरको विकास हरेक जिल्ला सदरमुकाममा सम्भव छ र सहज अनि सस्तोमा त्यस्ता शहर बन्न सक्छन् । त्यसैले उज्यालो बेसीशहरको सपना देख्ने हो भने आजैदेखि वैज्ञानिक योजना निर्माणमा लागिहाल्नु आवश्यक छ । जनताको साथ लिएर जनप्रतिनिधिहरु यो काममा अगाडि बढे मात्र लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्नेछन् र त्यसले सुुखी जनता र समृद्ध लमजुङको लक्ष हासिल गर्न सकिनेछ ।